Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Rosia dia maniry ny fananany Las Vegas any Sochi
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tranobe Sochi Casino sy Resort ao amin'ny faritry ny filokana Krasnaya Polyana, Sochi, Russia
Hovarina ny faritra filokana any Krasnaya Polyana any Rosia mba hifaninana amin'ireo ivon-toerana fialamboly iraisampirenena lehibe indrindra.
Rosiana Krasnaya Polyana Rosiana no misafidy ny hifanaraka amin'ny maodelim-pandraharahana Las Vegas amin'ny 2026.
Mikasa ny hamerenana amin'ny laoniny ny toeram-pialamboly ny mpamorona mba hampifantoka ny tombony lehibe amin'ny serivisy fialamboly fa tsy filokana.
Ny faritra filokana ao Krasnaya Polyana dia misolo tena ny orinasa filokana telo.
Krasnaya Polyana dia ivon-tsambo sy snowboard malaza any atsimon'ny tanànan'ny Rosiana Sochi manana ny lazany ho "hajaina" indrindra any Rosia. Malaza ihany koa izy noho ny faritra filokana noforoniny tamin'ny Aogositra 2016.
Solontenan'ny filokana telo no misolo tena ny faritra filokana ao Krasnaya Polyana amin'izao fotoana izao: Casino Sochi, Efitrano milina fividianana Bonus ary Casino Boomerang. Ny faritra filokana koa dia ahitana teatra, Hotely Bonus, trano fisakafoanana maromaro ary faritra fanaovana spaoro sy fialamboly Wow Arena.
Amin'izao fotoana izao, ny fotodrafitrasa ao amin'ny Resort Krasnaya Polyana dia novolavolaina sy nitarina hampifanaraka azy amin'ny maodely fandraharahana Las Vegas amin'ny 2026.
“Ny drafitra stratejika dia mandrakotra ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa ao amin'ny toeram-pialofana. Mandritra ny dimy taona ho avy dia hanitatra sy hampifanaraka ny fotodrafitrasa ao amin'ny faritry ny filokana Krasnaya Polyana amin'ny maodely fialamboly any Las Vegas izahay, ”hoy i Dmitry Anfinogenov, lehiben'ny fampandrosoana ny tetikasa.
Mikasa ny hanomboka amin'ny fanitarana ny Boomerang Casino ireo mpamorona, manangana efitrano milina fametahana slot vaovao ary mikarakara fidirana maimaimpoana amin'ny trano fisakafoanana premium an'ny Brunello. Ny fanokafana trano fisakafoanana vaovao ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Rosa Khutor dia ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny 2021-22 ihany koa.
Eo an-dàlam-pandrosoana ihany koa ny asa fanamboarana ny Bonus Hotel ankehitriny, miaraka amin'ny efitrano fanampiny azo ampiana amin'ny volana ho avy. Ny faritra fanatanjahan-tena sy fialamboly Wow Arena dia havaozina ihany koa amin'ny fararano, raha efa nisokatra ny teatra vaovao amin'ny rihana faharoa amin'ny Sochi Casino.
Mikasa ny hamerenana amin'ny laoniny ny toeram-pialamboly ny mpamorona mba hampifantoka ny tombony lehibe amin'ny serivisy fialamboly fa tsy filokana. Na izany aza, nambaran'izy ireo fa ny faritra filokana dia hamboarina mba hifaninana amin'ireo ivon-toerana fialamboly iraisampirenena lehibe indrindra.
Hatramin'ny nisokafany tamin'ny 2016, ny faritra filokana Krasnaya Polyana ao Sochi dia efa notsidihin'ny olona 2 tapitrisa mahery avy amin'ny firenena 155. Tamin'ny taona 2018, Casino Sochi Nahazo ny mari-pankasitrahana ny fiainana sy ny asa any Mosko ho tetikasa fialamboly tsara indrindra any Rosia.